Rasaasa News – Sanadkii 2008 Maxaad ku Xasuusan Kartaa! Waxeynu Weyney Saddex Hoggaamiye!
Sanadkii 2008 Maxaad ku Xasuusan Kartaa! Waxeynu Weyney Saddex Hoggaamiye!
on January 1, 2009 5:04 pm
[January 01, 2009] Ugu horeyn sanadkan bilaabanaya iyo midkan dhamaanaya ma ahan midkii Islaamka iyo diinteena muqaddaska ah, hase ahaatee waxaa caado xun iska noqotey inaan aad u isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee umadda Ogaadeenya maxaa ugu xanuun badnaa oo sanadkii 2008 soo marey, inagoo qormooyinka danbe kusoo qaadan doona waxyaabaha xiisaha badnaa.
Sanadkii 2008 waxuu ahaa sanad waxyaabo badan lagu xasuusan karo gaar ahaan dhanka halgankii umadda Ogaadeenya astaanta u ahaa ee boqolaalka jirsadey. Laga soo bilaabo Axmed Gurey illaa maalinkaa maanta ah bulshada Soomaali Galbeed marwalba lagama waayin rag naftooda u hurey iney ka dhiidhiyaan xumaanta dhiiggoodana u huraan. Haddaba sanadkii 2008 waxaa geeriyoodey oo ay middii Illaahay ee xaqa ahayd u timid halgamayaal caanka ahaa gayiga Soomaaliyeed aadna loo xasuusto wanaaggoodii iyo dadaalkii ay usoo galeen qaddiyada Ogaadeenya(Somaligalbeed).
Waxaa sanadkii 2008 geeriyoodey rag ahaa sumaddii halganka oo muddo badan kasoo qaybgalay dagaaladii lagula jirey dawladihii kala danbeeyey ee Ethiopia. Waxayna raggaasi eebbe naxariistii ha geeyee ay kala yihiin:
1- Sheekh Cabdinaasir Sheekh Aadan oo ku geeriyoodey magaalada Qabridahare
2- Sheekh Ibraahim Cabdalla Maax oo ku geeriyoodey dalka Imaaraadka Carabta.
3-Sheekh Cabdisalaan Maxamed Maxamuud(Dayl) oo ku geeriyoodey magaalada London
Saddexdan halgame waxey ahaayeen astaanta umadda Ogaadeenya waxeyna inbadan ku taameen iney umaddooda xornimo taam ah gaadhsiiyaan taasoo aan wali dhicin. Waxaan eebe uga baryeynaa in saddexdan marxuum janadii geeyo ehelkoodii iyo guud ahaan bulshada Ogaadeenyana samir iyo Iimaan ka siiyo. Aamiin. Saddexdan masuul eebbe naxariistii ha ugu deeqee waxey umaddan uga tageen sharaf iyo karaamo waaana lagama maarmaan in karaamadaasi ay ahaato mid sii jirta oo aan marnaba la halmaamin. Karaamadu waxey ku idishaha wadajir iyo walaalnimo waxeyna ku dhimataa kala tagga iyo iska hor imaadka.
Sanadka 2009 waxaan eebbe uga baryeynaa in umadda Ogaadeenya ay garab iyo gaashaan isku noqdaan xaqana illaahay waafajiyo, kusugo, kuna dilo isaga si liibaan adduun iyo mid aakhiraba ay u helaan.
Si astaantii iyo sharaftii geesiyaashii ka tageen usii xoogeysato waxaa lagama maarmaan ah in umaddu wadajirka ka shaqeyso